Izizathu ezi-3 zokuthi kungani i-franchising ilungele umnotho? | Franchiseek
Izizathu ezi-3 zokuthi kungani i-franchising ilungele umnotho?
»Izizathu ezi-3 zokuthi kungani i-franchising ilungele umnotho?
I-Franchising manje sekuyindlela ethandwa kakhulu kunoma yibaphi abanikazi bebhizinisi noma ngabe banebhizinisi elincane noma elikhulu. Ngakho-ke uma ucabanga ukuhlanganisa ibhizinisi lakho namuhla sizokwabelana ngezizathu ezi-5 zokuthi kungani kufanela ibhizinisi lakho kungaba ngumqondo omuhle kuwe ukusiza umnotho.
1.) Franchising inikeza imisebenzi eminingi
I-Franchising ilungele umnotho njengoba ihlinzeka ngemisebenzi eminingi emphakathini wangakini. Okubuye kusize umnotho ukuthi uchume kakhulu futhi uma ungandisa ibhizinisi lakho futhi unikeze imisebenzi ngasikhathi sinye ukusiza umphakathi wakho umbuzo olula wokuthi kungani kungenjalo?
2.) IFranchising inyusa izigidi ngezibonelelo zokupha
Okwesibili ukufiphala kuhle kakhulu emnothweni ngoba kubuye kunyuswe izigidi ngezibonelelo zawo ezikhethiwe unyaka ngamunye. Lokhu nakanjani lokhu kufaka Franchise ngoba kukunika ithuba lokusiza abantu abakudinga ngempela.
3.) I-Franchising ilungele ukukhula komnotho ukukhula komnotho
Manje sizokwabelana ngezibalo ezithile ezaziqoqwe emazweni ase-United States. Kepha kufanele kukunikeze umbono omuhle wokuthi i-franchising inikela kanjani emnothweni womhlaba jikelele.
Uthi bewazi? E-USA minyaka yonke ukufakelwa umfutho kufaka isandla emgidini wamarandi ayizigidigidi eziyi-1.3 emnothweni awusiza ungagcini ngokuphila usiza umnotho ukuthi uchume.
Siyethemba ukuthi le ndatshana emfushane isize noma ngubani ofuna ukwenza ibhizinisi labo ukuthi libanikeze umbono wokuthi bawenza kanjani umthelela omuhle futhi hhayi endaweni yangakubo esiza kuphela ukukhulisa umnotho wonke. Futhi uma ufuna ukutshala ithuba le-franchise ngincoma kakhulu ukuthi ubhekabheke kwisikhombi sethu e-Franchiseek enikela amathuba e-franchise aphesheya.
Imithombo: Forbes, Statista, Ibisworld
I-Screen Rescue Franchise ikunikeza ithuba lokuqala ibhizinisi lakho lokulungisa ama-multi-van, lapho ungafinyelela khona…